Indhaha Dagaalyahanada Xuutiyiinta Yeman oo ku soo ligligan dekedda magaaladda Berbera – Madal Furan
Hoy > Warka > Indhaha Dagaalyahanada Xuutiyiinta Yeman oo ku soo ligligan dekedda magaaladda Berbera
Indhaha Dagaalyahanada Xuutiyiinta Yeman oo ku soo ligligan dekedda magaaladda Berbera
Editor March 26, 2018 0
Madal Furan – Dagaalyahanada Xuutiyiinta ayaa shalay waxay weerar ay u adeegsadeen gantaalaha meelaha fogfog wax ka duqeeya u adeegsadeen magaalooyinka Boqortooyadda Sacuudi Carabiya.
Dagaalka ka socda dalka Yeman ayaa waxaa si weyn uga qayb qaadanaya dalka Imaaraadka Carabta oo ka mid ah xulufada ay hogaaminayaan Boqortooyadda Sacuudigu, waxaana gudaha dalka Yeman ka dagaalama ciidamo ay hubeeyeen dowladda Imaaraadka Carabtu.
Masaafadda Gantaalaha ay Xuutiyiintu isticmaalayaan ayaa gaaray caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad, gantaalahaasoo socday masaafo ka badan 800 Km, taasina waxay ina tuseysaa in awooda gantaalaha Xuutiyiintu ay tahay mid khatar ku noqon karta Saldhiga Milateri ee dalka Imaaraadka Carabtu doonayo inuu ka sameysto deegaamada xeebaha Badda Cadmeed oo ay ka mid tahay magaaladda Berbera.
Dadka arrimaha Milateriga falanqeeya ayaa rumeysan inay Xuutiyiintu isu gaabinayaan dhismaha saldhiga Milateri ee Imaaraadku qorsheynayo inuu ka sameysto dalka Yeman, markaas kadibna ay fursad u heli doonaan goob ay kala dagaalamaan dalka Imaaraadka Carabta oo ay rumeysan yihiin inuu buddhige u yahay dagaalka xulufada Sacuudigu ay ku doonayaan inay ku burburiyaan awoodooda iyo hamigooda ah inay xukumaan dalka Yeman.
Xuutiyiinta oo la rumeysan yahay inay ku tiirsan yihiin tiknoolajiyada dalka Iiraan oo ay isku bahaystaan mabda’a Shiicada ayaan la dhayalsan karin gantaalaha ridada dheer ee dowladda Iiraan u gacan gelineyso dagaalyahanada Xuutiyiinta.
Haddaba Magaaladda Berbera maxay noqon doontaa?
Maamulka Somaliland ayaa dhowaan heshiis la galay shirkadda DP World, kaasoo ku qotoma horumarinta dekedda magaaladda Berbera iyo in magaaladdaasi ay hesho fursado ganacsi firfircoon oo dowladda Itoobiya ay qayb ka noqoto.
Waxaa sidoo kale Maamulka Somaliland uu horayba u saxiixay heshiis ogolaanayey in dalka Imaaraadka Carabtu uu saldhig Milateri ka sameysto magaaladda Berbera, balse arrimahaas ayaa waxaa ka biya diiday Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Marka aynu jaleecno dhinaca siyaasaddaha Caalamiga ah, dowladda Jabuuti ayaa dalkeeda waxay ka cayrisay shirkadda DP World oo ay horay heshiis kula gashay dekedda Dorale, kadib markii ay gansadeen heshiiska cusub ee DP World ay dekedda Berbera oo dhinaca ku haysa dekedda Dorale ay shirkadaasi heshiis cusub la gashay iyo weiba arrimo siyaasadeed oo ay dowladda Imaaraadka Carabtu hoos ugu daadegtay arrimaha dalka Jabuuti.
Marinka Baabul Mandab oo halbowle u ah marinka gaadiidka badda iyo weliba Istiraajiyadda siyaasadeed ee badda Cas ee ku qotoma waddamada Quwadaha waaweyn ayaa wuxuu iftiiminayaa in ay adag tahay in qolo gaar ahi awood milateri oo xoog weyn ka dhex abaabuli karin deegaamadda ka ag dhow marinkaas.
Haddaba, heshiiska maamulka Somaliland la galay shirkadda DPWorld iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa u muuqda mid ay ka dhalan karto dagaal gacan ka hadal ah oo uga yimaada dagaalyahanada Xuutiyiinta oo gantaalahooda Balastikada ah ay ku soo ridaan gudaha magaaladda Berbera.
Madaxweyne Farmaajo oo booqasho Labaad ku tegaya dalka Eriteriya iyo ujeeddada ka danbeysa
Shirkii Garoowe oo maalin dib-u-dhacay iyo wafdi horudhac ah oo DFS u dirtay halkaas.
Sucuudiga: Daroniska Xuutiyiinta oo duqeeyey Laba goobood oo shirkadda shidaalka ee Aramko ku leedahay Sacuudiga.